Nagarik News - घट्दो देउसी रौनक
'ए है, भन भन भाइ हो' – देउसी रे
'रामरी भन' – देउसी रे
'स्वर मिलाइकन' – देउसी रे...
देउसीको यो लोकभाकामा जति मिठास छ, त्यसमा प्रयोग भएका झर्रा नेपाली शब्दले नेपालीत्वलाई जीवन्त राखिरहेकै छ । यसको सुरुवातबारे इतिहासले पुष्टि गर्न नसके पनि श्रुति परम्पराकै आधारमा देउसी–भैलो आजसम्म पनि खेलिँदै आएको हो ।
अन्य संस्कार–संस्कृति समयको परिवर्तनसँगै बद्लिँदा छन्, जसबाट देउसी पनि अछुतो छैन । विभिन्न ग्याजेटहरूको प्रवेशले देउसीको लयात्मकता रक र पपमा रूपान्तरित हुँदै गएकोमा कतिपय संस्कृतिकर्मी चिन्ता व्यक्त गर्छन् ।
देउसी–भैलोको सुरुवातबारे फरक–फरक किंवदन्ती सुनिन्छन् । ठाउँ, जाति र क्षेत्रअनुसार देउसी–भैलो खेल्नै शैली फरक भएकाले पनि यसको विविधतालाई पुष्ट गर्छ । यसबारे अझैसम्म गहिरो अध्ययन–अनुसन्धान हुन नसकेको इतिहासविद् दिनेशराज पन्तको भनाइ छ । 'पौराणिक कालका दैत्य राजा बलिसँग जोडिएको किंवदन्ती धेरैलाई थाहा छ,' उनले भने, 'देउसीको सुरुवातलाई कर्णालीका राजा बलसँग पनि जोडिएर हेर्ने गरिएको छ । तर कुन सहि हो अनुसन्धानले पुष्टि गर्न सकेको छैन ।'
जहाँबाट जसरी सुरु भए पनि तिहारसँग जोडिएको अभिन्न अंग हो देउसी । विनादेउसी र भैलो तिहार फिक्का हुन्छ । देउसीकै कारण रमाइलो बन्ने तिहार पछिल्लो समय खल्लो बनेको छ । आधुनिकताको नाममा देउसीका भाका र खेल्ने तरिका पनि फेरिएका छन् । कतिपय देउसी टोलीमा हुने उच्छृंखलताकै कारण देउसेप्रति नकारात्मब धारणा बनाउनेहरू पनि छन् । 'एकदिन देउसी खेलुन् न त भनेर ढोका खुल्ला राख्यो । महिनौं लगाएर चिटिक्क पारेको दूबो एकैरातमा स्वाहा बनाउँछन् । फुल चुँडिदिन्छन् उस्तै,' नयाँ बानेश्वरका प्रमोद खरेलले भने, 'त्यस्तै टापटिपे परे भने त चोर्नै पनि बेर लाउँदैनन् । देउसी गाएकै सुन्न मन लागे टिभीले देखाइहाल्छ । नत्र युट्युब हेरे भै'गो नि ।'
नेपालमा भएको १२ वर्षे युद्धको प्रभाव धेरथोर यहाँको संस्कृतिमा पनि प¥यो । राति अबेरसम्म गाउँ–गाउँ डुलेर खेलिने देउसीको चलन विस्तारै कम हुँदै गयो । स्थानीय प्रशासनले सीमित समय सीमाभित्र मात्र देउसी खेल्न पाइने उर्दी जारी गर्न थालेको पनि निकै वर्ष भइसक्यो । उति बेला सुरक्षाका कारण यस्तो उर्दी जारी गरिने भए पनि त्यसले अहिलेसम्म पनि निरन्तरता पाइरहेको छ । यसकारण पनि देउसीप्रतिको मोह घटेको हुनसक्छ ।
'हिजोआज देउसी खेल्ने भनेका केही टोलका बच्चाहरू हुन् । ठूलाहरू आइहाले पनि ड्रम, गिटार लिएर आउँछन्,' मैतिदेवी निवासी प्रतिभा पन्तले भनिन्, 'त्यसपछि बत्तीको कनेक्सन चाहियो भन्छन् । लम्लस्टि गर्छन् । त्यसैले ढोकै थुनेर बस्यो आनन्द ।' केही वर्षयता देउसी खेल्न आउने पूर्वसूचना दिएरै मात्र देउसेहरू घरमा पुग्छन् । तर, यसरी पुग्नेहरूको माग पनि त्यही अनुरूपको हुने भएकाले प्रायः घरबेटी कोही देउसी खेल्नै नआए हुन्थ्यो जस्तो गर्छन् ।
साथीहरूसँग मिलेर देउसी खेल्न रुचाउने भैंसीपाटीका अभिषेक श्रेष्ठले देउसी खेल्न छाडेको दुई वर्ष भयो । उनी भन्छन्, 'पहिलाजस्तो साथीहरू पनि छैनन् । फेरि कहाँ जाने ? नजिकमा रहेका केही चिनेजानेका आफन्तकहाँ बाहेक अन्यत्र गएर काम छैन ।' उनका अनुसार पैसाकै लागि भनेर देउसी खेल्नेहरूका कारण समस्या आएको हो । 'रमाइलोको लागि मात्र खेल्ने हो भने जसले पनि स्वागत गर्छन्,' उनले भने, 'अहिले देउसी खेल्ने भनेको क्लब र संस्थाको नाममा पैसा उठाउने सजिलो बाटो बनेको छ ।'
केही वर्षदेखि सिस्नोपानी नेपालको तर्फबाट देउसी खेलिरहेका हास्यकलाकार मनोज गजुरेलका अनुसार देउसी खेल्ने तरिकामा धरै परिवर्तन आइसक्यो । तर, उनी त्यसलाई स्वाभाविक मान्छन् । भन्छन्, 'समयअनुसार परिवर्तन हुँदै जान्छ । यसले असर गर्दैन बरु जगेर्ना नै गर्छ । तर, विकृति रोक्न भने लागिपर्नुपर्छ ।' यो वर्ष पनि सिस्नोपानी नेपालले विभिन्न ठाउँमा देउसी खेल्दै छ । 'यसपालिको देउसीचाहिँ निर्वाचन केन्द्रित बनाउने योजनामा छौं,' उनले सुनाए ।
इतिहासविद् पन्त पनि देउसीमा आएको परिवर्तनलाई मात्रै विकृति भन्न नहुने बताउँछन् । 'संस्कृति सधैंभरि एकैनासको हुँदैन । समयानुकूल परिवर्तन भइरहन्छ,' उनले भने, 'पहिले यसरी खेलिन्थ्यो, अहिले यसरी खेलियो भन्न मिल्दैन । संस्कृति सधैं परिष्कार र परिमार्जन हुँदै जाने हो ।' उनी देउसेहरूले बढी दक्षिणा माग्ने कुरालाई स्वाभाविक ठान्छन् । 'अहिलेको महँगीले केटाकेटीलाई पनि छोएको छ । त्यसको प्रभाव देउसे–भैलेमा पनि त पर्ला नि ।'
तिहारको केही सातापछि नै चुनाव हुने भएकोले पनि यसपालिको देउसी–भैलो खेल्नेलाई त्यसको प्रभाव पर्नेछ । चाडबाडका नाममा अवाञ्छित गतिविधि हुन नदिन र चुनाव लक्षित सुरक्षा व्यवस्था मजबुत पारिँदै लगिएको काठमाडौं प्रहरी परिसर हनुमान ढोकाका प्रमुख एसएसपी सुबोध घिमिरेले बताए । 'हामीले यसपालि देउसी–भैलो खेल्ने समय छोट्याएर रातको नौ बजेसम्म मात्र राखेका छौं,' उनले भने, 'त्यसपछिको समय देउसी–भैलोमा रोक लगाउनेछौं ।'
गएका वर्षहरूमा भन्दा समय सीमा निकै कम तोकिएको र प्रहरीको उपस्थिति बाक्लिएकाले यसपालिको देउसी रौनक उतिसारो रमाइलो नहुने अनुमान गर्छन्, अभिषेक श्रेष्ठ । 'देउसी भनेको बेलुका खेल्ने हो । दुई–तीन घरमा खेल्दैमा नौ बज्छ,' उनी भन्छन्, 'तीनटा घरकै लागि के देउसी खेलाई भयो र ?' उनलाई यसपालि देउसी खेल्न मन छैन र योजना पनि बनाएका छैनन् । 'परिवार र साथीहरूसँगै घरमै बसेर रमाइलो गरिन्छ,' उनले भने ।